Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men 3.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.5 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား အလှအပ Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men
Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Macho မျက်နှာတည်းဖြတ်ရေး, ခန္ဓာကိုယ် changer နဲ့ကို virtual ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများနှင့်လူကိုမိတ်ကပ် app ကိုအတူယောက်ျားအတွက်အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ catalog ခြောက် Pack ကို ABS, က Man ဆံပင်စတိုင်, နှုတျခမျးမှေး, ဝတ်စုံကို, ခိုင်ခံ့သောရင်ခေါင်းအထူးကု, လက်နက်နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ခန္ဓာကိုယ်စတိုင်ပုံစံဒီဇိုင်းများကိုအောင်ရှိပါတယ်။
က Man ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာလိုလားတဲ့ပနျခြာပီဗေါင်း, Rajasthani ဗေါင်း, မျက်နှာသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားအပေါ်, ယောက်ျားသည်ရယ်စရာမျက်နှာ Changer, Tattoo အလံဆံပင်, မုတ်ဆိတ်၏အံ့သြဖွယ်စုဆောင်းခြင်း, အမျိုးသားများအတွက်နှုတ်ခမ်းမွှေး, Cap, ဦးထုပ်ဓာတ်ပုံ Montage, နေကာမျက်မှန်နဲ့ပြည့်စုံယောက်ျားသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများအလှဓာတ်ပုံတစ်ပုံအယ်ဒီတာဖြစ်ပါသည် ခန္ဓာကိုယ်, ဆံပင်စတိုင်များ, အမျိုးသားများခန္ဓာကိုယ်စတိုင်များခေတ်မှီ, ပြိုင်ကားဆန်သောကြည့်နှင့်အတူဓာတ်ပုံကိုအယ်ဒီတာ, ဒီဇိုင်နာနှင့်ပုံစံတက်တူးကိုက်ညီ။
အမျိုးသားများအတွက်ဓာတ်ပုံ Editor ထဲမှာ Crazy စတိုင်ခြောက် Pack ကို ABS ကြိုးစားကြ & သင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုပေါ်လက်ချောင်းထိတွေ့နှင့်အတူချက်ချင်း biceps, ကြီးသောရင်ဘတ်နှင့်အတူခြောက်လဗူးတွေစိတ်ကူးယောက်ျားဆံပင်ပုံစံတွေနှင့်မုတ်ဆိတ်စတိုင်များနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကြည့်ရ။ ယောက်ျားလေးများဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာခုနှစ်တွင် dudes.men နှင့်ယောက်ျားလေးများပိုချောမောခေတ်မှီနှင့်စတိုင်စုံလင်သောမျက်နှာ changer သို့အလှတရား selfies ပြောင်းနှင့်လူတို့၏အဘို့အပလီကေးရှင်းကိုကျော်ပါစေ။ လူကိုဆံပင်စတိုင်လ်နဲ့မုတ်ဆိတ်စတိုင် app ကိုဆွဲဆောင်မှုနှင့်အေးမြယောက်ျားမုတ်ဆိတ်စတိုင်များရှိပါတယ်။
hombres ရှာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတအယ်ဒီတာနှင့်အတူ smarty ကွညျ့ရှု? ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယောက်ျားတက်အောင် mustache နှင့်ယောက်ျားလေးများမိတ်ကပ် app ကိုအတူစတိုင်လူအားပြောင်းလဲပစ်။ က Man ဆံပင်စတိုင်ဓာတ်ပုံကိုဆံပင်, ယောက်ျားဆက်စပ်ပစ္စည်း, BG Eraser ကိုလူတို့အဘို့ဓာတ်ပုံနောက်ခံ changer အပေါ်စမ်းပါ။ ဒီ Genting ဆံပင်စတိုင်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ app ကိုအတူအမွေး, ခေတ်မှီကွညျ့ရှု
က Man ဆံပင်နှုတ်ခမ်းမွှေးပုံစံ Pro ကိုမုတ်ဆိတ်က Man မုတ်ဆိတ်မျက်နှာအယ်ဒီတာ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်ရယ်စရာဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ, ဖက်ရှင်မုတ်ဆိတ်တဲမုတ်ဆိတ်မွေးဓာတ်ပုံတစ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ယောက်ျားဆံပင် Styler app ကိုဖက်ရှင်ဆံပင်အရောင်များရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဆံပင်ဆိုးဆေးများနှင့်ဆံပင်ပုံစံဒီဇိုင်းအဘို့ယောက်ျားဆံပင်အလှပြင်ဆိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ နေကာမျက်မှန်ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ Amazing စုဆောင်းမှုရှိပါတယ်။
တစ်ဦးအဆီခန္ဓာကိုယ်ရှိနေပါသလား? ကြွက်သားကိုယ်ခန္ဓာ၏ခြောက်အထုပ်များနှင့်အပြည့်အဝလိုချင်သလား? အမျိုးသားများအတွက်ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံ changer PRO.This ဆံပင် styler app ကိုလူတို့သညျအဘို့အတော်ဝင်နှင့်စတိုင်ကြည့်နှင့်အတူလူနှင့်ယောက်ျားလေးဆံပင်နှုတ်ခမ်းမွေးစတိုင် changer application ဖြစ်ပါတယ်၌အကြှနျုပျတို့၏ခြောက်လ pack ကိုကင်မရာ app ကိုနှင့်သင်၏ pic ကိုတည်းဖြတ်ခြောက် Pack ကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ montages.Try က Man ဆံပင်နှုတ်ခမ်းမွှေးမုတ်ဆိတ်ဓာတ်ပုံဝတ်စုံအောင် ကအကောင်းဆုံးမျက်နှာ changer ဖြစ်ပါတယ် image ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အတူပလီကေးရှင်းကိုကျော်ဖြစ်စေလျက်, stache တဲများနှင့်ဆံပင်တဲ trends.This Boy ပုံစံ၏ catalog changer app ကိုဦးဆံပင်ညှပ်ခြင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းမွေးစတိုင်များထုတ်လုပ်သူနှင့်သင်၏ pic ကိုမှချောမောကြည့်ပေးသည်တက်ပါစေ။ နှုတျခမျးမှေးကိုတက်စေ Dash နှင့်အေးမြစတိုင် changer ပေးပါ။ ဤသည်အစွမ်းထက်ရုပ်ပုံအယ်ဒီတာ image ကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ, အရောင်သက်ရောက်မှု, ရုပ်ပုံဆိုးကျိုးများနှင့်သင့်လှပသောဓာတ်ပုံများင့်တယ်စေ bokeh သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
အမျိုးသားများအတွက် photo-editing app ထဲမှာရုပ်ပုံအကျိုးသက်ရောက်မှု, Gray, အရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှု, Bokeh အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်တဦးတည်းထိတွေ့၌ဤအလှအပဓာတ်ပုံကင်မရာထဲမှာအများအပြားဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သက်ရောက်မှုနှင့်အတူတစ်အမြင်အာရုံ Histogram & photoshop နှင့်အတူဓာတ်ပုံကို adjust ။
မိန်းကလေးများ Macho ခုနှစ်တွင်ခြောက် ABS ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့်တကွသင်၏ဓါတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း start နှင့်သင့်ခန္ဓာကိုယ်စတိုင်ပြောင်းလဲချောမောဝတ်စုံနှင့်အတူဖန်တီးမှုနှင့်စတိုင်တက်တူးနှင့်အတူခြောက်အထုပ် ABS, အားကြီးသောလက်နက်နှင့်အစွမ်းထက်ရင်ဘတ်နှင့်အတူယောက်ျားသို့မဟုတ်ယောက်ျားလေးများအပေါ်အရူးဖြစ်ကြ၏။
ဒါဟာတူသောအရူး features တွေရှိပါတယ်:
က Man နှုတ်ခမ်းမွှေး & မုတ်ဆိတ်ဓာတ်ပုံ Editor ကို
က Man ဆံပင်ဓာတ်ပုံ Editor ကို
မျက်နှာ changer ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ
အထူးဒီဇိုင်နာများနှင့်လည်းအင်တာနက်မပါဘဲအလုပ်လုပ်သည်၎င်း၏တစ်ဦးအခမဲ့ Android ကို App ကယောက်ျားများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ Awesome ကိုအင်္ဂါရပ်တွေ, အခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ၌သင်တို့၏ဓာတ်ပုံကိုပိုပြီး fashionable.Try ဖန်တီးမှုဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်စေပါသည်။
ပြခန်းမှသင်၏ဓါတ်ပုံကို 1.Select သို့မဟုတ်ကင်မရာကနေ selfie ဖမ်းယူ။
2. ခြောက်လဗူး, မုတ်ဆိတ်, နှုတ်ခမ်းမွှေး, ဆံပင်, ဓာတ်ပုံဝတ်စုံ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ catalog ပြခန်းထံမှ Tattoo ကို select နှင့် seekbar Adjustments နှင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်သို့သူတို့ကိုရောနှောနေခြင်း။
3. စကေးနှင့်သင်တို့အပေါ်မှာခြောက် Pack ကိုယျခန်ဓာကို, မုတ်ဆိတ်, ဆံပင်စတိုင်နှင့် Tattoo fit မှလှည့်။
4. လည်းရယ်စရာစတစ်ကာများဖြည့်စွက်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရယ်စရာဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာ၌အကြှနျုပျတို့၏ stickers.Try ရယ်စရာဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ထံမှရင်ဘတ်, လက်နက်နှင့် Clipart ထည့်ပါ။
5. Snap / tag ကို - ရောင်စုံစာလုံးတွေနှင့်အတူစာသားကိုထည့်ပါ။
ရုပ်တုဆင်းတုမှ 6.Apply ဖန်တီးမှုဓာတ်ပုံကိုအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။
7. Facebook က, Instagram ကို, Skype, WhatsApp, twitter နဲ့ Snapchat နှင့်သင်၏အသစ်အကြည့်ပြဿနာနှင့်မေးခွန်းများဓါတ်ပုံကိုမျှဝေပါ။
8. ပြခန်းရန်သင့်ဖန်တီးမှု Save ။
wallpaper မှ9သတ်မှတ်မည်ပုံရိပ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်အတူရှယ်ယာလုပ်ဖို့သင့်သုံးသပ်ချက်များနှင့်သင်၏တုံ့ပြန်ချက် Drop ပေးပါ။
Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men အား အခ်က္ျပပါ
oyebahi စတိုး 41 65.8k
Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.5
ထုတ်လုပ်သူ Pixel Force Pvt Ltd
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://pixelforce.in/privacy_policy.htm
App Name: Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men
Release date: 2019-08-09 15:06:06
လက်မှတ် SHA1: 22:06:2B:A6:AB:23:70:ED:2E:0E:4C:52:DE:5E:6C:AE:F6:B3:E9:55
ထုတ်လုပ်သူ (CN): PixelForce
အဖွဲ့အစည်း (O): PixelForce
နယ်မြေ (L): Banglore
နိုင်ငံ (C): "+91"
Macho - Man makeover app & Photo Editor for Men APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ